याै’न सम्पर्क गर्दा काेराेना भाइरस सर्छ कि सर्दैन ? चिकित्सकले दिए यस्ताे सुझाव — Imandarmedia.com
याै’न सम्पर्क गर्दा काेराेना भाइरस सर्छ कि सर्दैन ? चिकित्सकले दिए यस्ताे सुझाव
चीनको वुहान शहरबाट गत डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण अहिले विश्वब्यापी महामारीको रुपमा तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । अहिलेसम्म यसको कुनै औषधि वा खोप पत्ता लाग्न सकेको छैन भने अवस्था नियन्त्रण बाहिर छ । संसारका शक्तिशाली देश मानिएका चीन, युरोप अमेरिका यो भाइरसको सबैभन्दा बढी चपेटमा परेका छन् ।
कोरोना भाइरसका विषयलाई लिएर विभिन्न खालका सूचना जानकारी समाचारहरु समाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । तर त्यस्ता जानकारी र समाचारहरु सबै सत्य छैनन् । ती जानकारीहरुले धेरैलाई अलमल बनाइको छ ।
त्यसैले पनि होला अहिले त्यस्ता अनेक खालका जानकारीतिर भन्दा पनि मानिसहरु पूरानो फोटोमा कमेन्ट हाम्रो भेट कहिले भएको थियो, कहाँ भएको थियो भन्ने जस्ता कुराहरु फेसबुकमा पोष्ट गरेर दिन कटाइरहेका छन् ।
यस्तैमा धेरैलाई जिज्ञासा लागेको विषयमा विज्ञहरुको रायका आधार मा बीबीसीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ । के यौ’न सम्पर्कका कारण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सर्न सक्छ ?
यसबारे तपाईँले सोच्नुभएको होला तर सङ्कोच लागेर प्रश्न नगर्नुभएको पनि हुन सक्छ। यस विषयमा सही र गलत कुरा छुट्यावन बीबीसी रेडिओ वनको न्यूजबीटले यो प्रश्न विज्ञहरूलाई राखेको छ। डा. एलेक्स जर्ज चिकित्सक हुन् भने यौ’न विषयमा पत्रकारिता गर्ने एलिक्स फक्स बीबीसी रेडिओकी पूर्वप्रस्तोता हुन्।
डा. एलेक्स जर्ज: यदि तपाईँ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र त्यो मानिससँगै बस्नुहुन्छ र एउटै वातावरणमा रहनुहुन्छ भने तपाईँले यौ’न व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्दैन। तर यदि तपाईँहरूमध्ये एक जनामा कोरोनाभाइरसको लक्षण देखिएको छ भने तपाईँले घरमै पनि एकान्तवासमा बस्नुपर्छ।
सबैभन्दा राम्रो त घरभित्रै पनि सबै जना एकअर्काबाट दुई मिटरको दूरीमा बस्नुपर्छ तर त्यो सधैँ सम्भव नहुन सक्छ। आफूलाई लक्षण देखिँदा आफ्नो सहवासीलाई पनि देखिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। यदि तपाईँलाई लक्षण देखिएको छ भने टाढा रहनु नै उचित हुन्छ।
डा. एलेक्स जर्ज: म यो अवस्थामा नयाँ मानिससँग यौ’न सम्पर्क राख्ने सल्लाह दिन्नँ। किनभने त्यसो गर्दा कोरोनाभाइरस सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। के नबिर्सिनुहोस् भने कोरोनाभाइरस भएका केही मानिसहरूमा लक्षण देखिएको हुँदैन। त्यसैले तपाईँ एकदमै ठिक देखिनुभएको छ भने पनि तपाईँबाट अरूमा चुम्बनबाट पनि भाइरस सर्न सक्छ।
पहिले मैले कन्डम प्रयोग गरेको थिइनँ । के अब गर्नुपर्ला ?
एलिक्स फक्स: यसको उत्तर तपाईँ किन पहिले कन्डम लगाउनु हुन्नथ्यो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि तपाईँहरू दुवै जनालाई कुनै यौन रोग नभएको वा गर्भाधान नहोस् बनेर अन्य उपाय अवलम्बन गरिएकाले कन्डम प्रयोग नगरेको भए केही फरक पर्दैन। तर यदि तपाईँ अन्य प्राकृतिक उपाय – जस्तो वीर्य स्खलन गर्ने वा एकअर्कालाई यौ’न रोग छैन भन्ने विश्वासमा कन्डम नलगाउनुभएको हो भने अब कन्डम लगाउनु नै उचित होला।
डा. एलेक्स जर्ज: यदि तपाईँ एकअर्काको यौ’नाङ्ग छुनुहुन्छ भने त्यो समयमा तपाईँहरूले चुम्बन गर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ र हामीलाई थाहा छ भाइरस थुकबाट सर्छ।
मुखबाट हातमा, हातबाट यौ’नाङ्गमा, यौ’नाङ्गबाट हातमा र त्यसपछि हातबाट नाकमुखमा भाइरस सर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा भाइरस सर्न सक्ने सबै खाले कुराहरू नगर्नु नै उचित हुन्छ। त्यसैले तपाईँसँगै नबसेका साथीसँग यो पनि नगर्नु नै उचित हुन्छ। बीबीसीकाे सहयाेगमा
अहिलेका बालबच्चामा किन चाँडै यौ’न परिपक्कता ?
अहिलेका धेरैजसो बच्चामा स्वभाविक उमेरभन्दा अगाडि नै यौ’न परिपक्कता देखिन्छ । अर्थात उनीहरुको यौ’नाङ्गको विकास, मासिक श्राव, स्तनको विकास आदि चाडै हुन थालेका छन् । जस्तो विगतमा १३ वा १४ बर्षपछि मात्र बालिकाको मासिक श्राव सुरु हुन्थ्यो । अहिले ८ वा १० बर्षभित्र मासिक श्राव हुनसक्छ ।
यौ’नाङ्गहरुको विकास पनि त्यही अनुसार भएको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वकै बालबालिकामा यस्तो परिवर्तन देखिदैछ । आखिर किन उनीहरुमा चाडै यौ’न परिपक्कता देखिदैछ ? यसमा एउटा मात्र कारण छैन । जलबायु परिवर्तनको प्रभावदेखि, खानपान शैली र यौ’नजन्य सामग्रीमा उनीहरुको पहुँच जस्ता अनेक कारण छन् ।
जटिलता यही प्रश्नमा छ । सामान्यत स्वभाविक उमेर भन्दा कम समयमै यौ’न परिपक्ता आउनु खास समस्या होइन । समस्या के हो भने, शारीरिक रुपमा जसरी यौ’न परिपक्कता देखिदैछ त्यस अनुपात मानसिक रुपमा उनीहरु परिपक्क छैनन् । अर्थात उनीहरुमा भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न र स्वीकार्नका लागि उनीहरु तयार छैनन् ।
यसले उनीहरुमा मानसिक समस्या थपिदिएको छ । साथै यौन विकृती समेत निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि पछिल्ला केही घटनाहरु काफी छन् । हामीले विभिन्न माध्यामबाट सुन्दै र पढ्दै आइरहेका छौं कि साना बालबच्चाहरुमा यौ’न कृत्यको घटना । १२, १३ बर्षका बालकहरु आफ्नै उमेरकी बालिकामाथि यौ’न कृत्य गर्न तम्सिएका उदेगलाग्दो घटना सुनिने गर्छ । बालबालिकामा यौ’न परिपक्कताले निम्त्याएको एउटा खतरा हो यो ।
यौ’न मनोविज्ञहरुका अनुसार अहिले विश्वव्यापी रुपमै बच्चाहरुमा यौ’निक परिपक्ता बढ्दै गएको पाइन्छ । यसले अभिभावकमा सुरक्षाको दवाब बढाइदिएको छ । आफ्ना बालबच्चा उनीहरुकै सहपाठीबाट असुरक्षित हुनसक्छन् भन्ने कुरामा सर्तक बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस किसिमको परिवर्तनको पछाडि विश्वव्यापी बढ्दै गएको ग्लोबल वार्मिङदेखि विद्युतिय उपकरणको प्रयोगबाट उत्सर्जन हुने विकिरणले यसमा भूमिका खेलेको बताइन्छ ।
अहिले बच्चाहरुको खानपानले समेत यौनिक परिपक्ता ल्याउनमा भूमिका खेलेको छ । खानामा विषादीको प्रयोग, एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग अधिक हुने भएकाले त्यसले शरीरमा हर्मोनल गडबडी ल्याएको छ ।
बोइलर कुखुरालाई छिटो बढ्नका लागि दिने दानापानीमा प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक्स लगायतका तत्व त्यही कुखुराको मासुको माध्यामबाट बालबालिकाको शरीरमा प्रवेश गरेको छ । सागपात, फलफूल छिटै ठूलो बनाउन, छिटो पकाउन प्रयोग गरिने औषधीहरुको सोझो असर समेत बच्चाहरुको स्वास्थ्यमा परेको छ । यसले उनीहरुमा यौ’निक परिपक्कता बढ्दै गएको बताइन्छ ।
अहिलेका बच्चाहरुले मोवाइल, ल्यापटप, टिभी आदि माध्यामबाट यौ’नजन्य सामाग्री सहजै हेर्न सक्छन् । सानै उमेरमा उनीहरु यौ’नजन्य श्रव्यदृश्य सामाग्रीमा रमाउन थालिसकेका पाइन्छ । यसल किसिमको सामाग्रीले पनि उनीहरुमा यौनजन्य कृत्य गर्न उक्साइरहेको छ ।
जुन हिसाबले यौ’निक परिपक्कता बढ्दैछ, त्यसलाई स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा बुझाउनका लागि अभिभावक नै अग्रसर हुनुपर्ने छ । बच्चालाई सानै उमेरमा यौ’नका बारेमा सही र तथ्यपरक जानकारी दिनुपर्छ । उनीहरुमा हुने शारीरिक परिवर्तनका बारेमा बुझाउनुपर्छ ।
मासिक श्राव होस् वा प्रजनन अंगको परिवर्तन, बच्चाहरुलाई त्यसको स्वभाविक प्रक्रियाबारे खुलस्त जानकारी दिनुपर्छ । आमाबुवाले छोराछोरीसँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने, घुलमिल हुने, उनीहरुको मनोदशा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।